लकडाउन खोल्दा तीन कुरामा ध्यान दिन डब्लुएचओका प्रमुख डा. घेब्रियसको भनाई - Rastriya Yuvajagaran Nepali News
होमपेज कोरोना विशेष लकडाउन खोल्दा तीन कुरामा ध्यान दिन डब्लुएचओका प्रमुख डा. घेब्रियसको भनाई
लकडाउन खोल्दा तीन कुरामा ध्यान दिन डब्लुएचओका प्रमुख डा. घेब्रियसको भनाई
३० बैशाख २०७७, मंगलवार १७:३३
काठमाडौं, ३० वैशाख २०७७ । कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेको आज ५० औं दिन हो । यो ५० दिनको लकडाउनको अवस्था के छ ? यो लकडाउनले कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथाममा कतिको फलदायी बनेको छ ? त्यसको समिक्षा गरेर लकडाउनपछाडि पनि स्वास्थ्यसंस्थाहरुले स्वतः रुपमा यसका विरुद्धमा लड्न सक्ने क्षमतामा पुगेका छन् कि छैनन भन्ने हेरेर मात्र लकडाउन खुकुलो पार्दै जानु पर्दछ यद्यीप लकडाउन खोल्दा समस्या जटिल बन्न पुग्ने तर्क विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डा. टेड्रोस आधानम घेब्रियसले सोमबार मिडिया ब्रिफिङमा राखेका छन् ।
नेपालमा पनि लकडाउनको सन्दर्भमा विभिन्न विचारहरु आइरहेका छन् । लकडाउन खोल्दा के हुने र नखोल्दा के नहुने भन्ने चर्चा विभिन्न कोणबाट हुँदै आएका छन् । हामी दुई ठूला राष्ट्रको बीचमा सानो राष्ट्रका रुपमा बसेका छौं । एउटा छिमेकी राष्ट्र चीन जहाँबाट कोभिड–१९ कोरोना भाइरस सुरु भयो । त्यहाँको वातावरण सहज भएर लकडाउन खोलेर यतिखेर फेरी संक्रमित देखा परेपछि पुनः लकडाउन लगाउन थालिएको अवस्था छ । यस्तै भारतमा पनि संक्रमितको संख्या अत्याधिक बढ्दैछ । खुल्ला सिमानाका कारणले भारतमा रहेका नेपालीहरु नेपाल आउन बोर्डरबाट छिर्ने, छिर्न नपाए विभिन्न माध्यमबाट छिरेर नेपाल प्रवेश गर्ने गरिरहेको पुष्टि भईसकेको छ । कोरिया, जर्मनीजस्ता स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अत्यन्तै राम्रा देशहरुमा पनि लकडाउन खोले पछि फेरी पुनः लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका दृष्टान्त हुँदा हुँदै नेपालमा लकडाउन खोलियो भने अवस्था भयावह हुने आँकलन एक पक्षको रहेको छ भने अर्को पक्ष नेपालमा अधिकांश नेपाली गरिखाने अवस्थाको भएको कारणले अब गरिखाने वातावरण पनि दिनु पर्छ सँधै लकडाउन लगाएर तिनीहरुको पेटमा लात्त हान्न मिल्दैन । जहाँ संक्रमण देखिएको छ त्यहाँ कडा गर्ने र संक्रमण नदेखिएको स्थानमा लकडाउन खोलेर वातवारण सहज बनाउनु पर्ने धारणा पनि आइरहेको छ । अब के गर्ने यसको निष्कर्ष त सरकारको पोल्टामा रहेको छ ।
अर्कोतिर लकडाउन नखोल्दा गरिखाने मानिसहरु स्वतःस्फुर्त रुपमा लकडाउन उल्लंघनमा उत्रने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । कोभिड–१९ कोरोना भाइरस त्यतिकै सितिमिति निर्मुल हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । कतिपय ठाउँहरुमा पुनः संक्रमण दोहोरिएर पुनः लकडाउन लगाउनुले यसको पुष्टि गरेकै छ । तर अब एकातिर गरिखाने ठूलो संख्या लकडाउनमा बसेको छ भने अर्कोतिर नेपाली अर्थतन्त्र समेत धरासयी बन्दै गएको छ । रोगसँग अर्थतन्त्र जोडेर हेरिरहँदा सरकारले आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवार्ड ग¥र्यो भन्ने आरोप पनि लाग्न सक्छ तर सरकारले अत्यन्तै संवेदनशिलता अपनाउनु जरुरी देखिन्छ । रोगको निदान हुन औषधि पत्ता लाग्नुपर्दछ त्यो नभए त्यो रोगसँग जनता आफै लड्नसक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्दछ तब मात्र महामारी निर्मुल हुनसक्दछ । यस अगाडि कतिपय महामारीहरुमा पनि ठूलो मानविय क्षति व्यहोरेकै हुन् । कतिपय रोगहरुलाई मानिसहरुले सामान्य रुपमा लिएर आउँदै गर्छ लड्दै गएपछि अन्ततः त्यो रोग आफै निर्मुल भएका छन् । यि दुवै विषयलाई गहन रुपमा लिनु पनि जरुरी देखिन्छ ।
यहि बेलामा आएको डब्लुएचओका प्रमुखको लकडाउनका सन्दर्भमा आएका भनाईहरुलाई अत्यन्तै गहन रुपमा लिनु जरुरी देखिन्छ । डब्लुएचओका प्रमुख डा. घेब्रियसले लकडाउन खोल्नु अगाडि तीन कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्– पहिलो : महामारी नियन्त्रणमा आएको छ वा छैन ?, दोस्रो : देशको स्वास्थ्य प्रणालीहरु लकडाउन खुकुलो पार्दा पुन दोहोरिन सक्ने समस्यासंग सामना गर्न सक्षम छन् ? चल्न सक्छन् ?, तेस्रो : स्वास्थ्यका निकायहरुले सम्भावित संक्रमितहरुको खोज पड्ताल गर्ने र पत्ता लगाउने अनि व्यवस्थापन गर्नुका साथै कन्ट्याक ट्रेसिङ गरी त्यसको सम्पूर्ण पहिचान गर्न सक्षम भएको छ ?
डा. घेब्रियसले अगाडी थपेका छन्, ‘यदि यी तिन कुरामा हामी सकारात्मक छौँ भने लकडाउन बारेमा सोच्न सकिएला कि ? तर यी तीनवटै केसको सकारात्मक जवाफ आएपनि लकडाउन खोल्दा थप जटिल भने हुनसक्छ । किनकी यसको के चुनौती हुनसक्छ त्यो हामीले गत हप्ता नै भनिसकेका छौँ । कोरियामा देखियो जो पहिले बन्द थियो । पछि खुल्यो र अहिले फेरी बन्द छ । चीनको बुहानमा पनि यस्तै देखियो । जर्मनीमा पनि लकडाउन खोलेपछि संक्रमितहरुको संख्या बढ्यो ।’ उनले अगाडी थपेका छन्, ‘सौभाग्य भनौँ यी तिनवटै देशमा स्वास्थ्यप्रणाली राम्रो छ ।’
अघिको समचार आज मंगलबार एकै दिन ५७ जनामा संक्रमण पुष्टि, ४ जना पत्रकार, कोरोना संक्रमितको संख्या १९१
अर्को समचार जनताको जीवनभन्दा अर्थतन्त्र ठूलो होइन : लकडाउनमा थप कडाई गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन